भारी व’र्षाका कारण घर भ’त्किँदा ९ जनाको मृ’त्यु, धेरै मानिस पु’रिएको आशं’कामा उ’द्धार जारी – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. भारी व’र्षाका कारण घर भ’त्किँदा ९ जनाको मृ’त्यु, धेरै मानिस पु’रिएको आशं’कामा उ’द्धार जारी – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
भारी व’र्षाका कारण घर भ’त्किँदा ९ जनाको मृ’त्यु, धेरै मानिस पु’रिएको आशं’कामा उ’द्धार जारी
भा’री व’र्षाका कारण घर भ’त्किँदा ९ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
भारतको मुम्बईमा बुधबार राति भारी वर्षाका कारण एक आवासीय भवन भ’त्किँदा ९ जनाको मृ’त्यु भएको हो । अन्य मानिस पुरिएको आशं’कामा उ’द्धार प्रयास जारी छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार मुम्बईको मलाड पश्चिम क्षेत्रमा बुधबार राति करिब ११ बजेतिर आवासीय चारतले भवन भ’त्किएको हो।
बृहन्मुम्बई नगरपालिकाका अनुसार मलाडको कलेक्टर कम्पाउन्डमा घर भ’त्किँदा अहिलेसम्म ९ जनाको श’व फेला परेको छ भने ८ जना ग’म्भीर घा’इते भएका छन्।
डीसीपी साउथ जोन विशाल ठाकुरका अनुसार अहिलेसम्म महिला तथा बच्चा गरी १५ जनाको उ’द्धार गरिसकिएको छ। भवनले अरू मानिस पनि थिचिएको आशं’कामा उ’द्धार जारी छ।
आसपासका अन्य ३ भवनको अवस्था पनि जो’खिमपूर्ण भएकाले त्यहाँका मानिसलाई अन्यत्र सार्ने क्रम चलिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
केही दिनयता घट्दै ग’म्भीर संक्रमित
कारोना खोप लगाउनेक्रम बढ्दै गर्दा ग’म्भीर संक्रमित भर्ना दरमा पनि केही कमी आएको पाइएको छ । यद्यपि, केही दिनयता संक्रमित संख्या घटे पनि जो’खिम कायम रहेको भन्दै हे’लचेक्र’याईं नगर्न जनस्वास्थ्य विज्ञले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको June 10, 2021 June 10, 2021 258 Viewed